. "နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်" | MRTV-4
. "နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်"
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်မီးမရရှိနိုင်တဲ့ ကျေးလက်ဒေသများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု ထိန်ထိန်သာကမ်းပိန်း ကို အောက်တိုဘာ (9)ရက် က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်းမှာရှိတဲ့ L’Opera ( L အိုပရာ)Restaurant မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ IFC ဟာ Lighting Myanmar စီမံကိန်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထိန်ထိန်သာအစီအစဉ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ဆောင်ရွက်မယ့် စားသုံးသူပညာပေးစည်းရုံး လှုံဆော်မှုအဖြစ်စတင် လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိန်ထိန်သာအစီအစဉ်က Lighting Global ၊ Greenlight planet ၊ Solar Home ၊d.light ၊ Ovsolar (အိုဗီဆိုလာ) အစရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကပူးပေါင်းပြီး ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိလူဦးရေရဲ့ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းဟာ မဟာဓါတ်အားလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဒီဇယ်သုံးမီးစက်များ၊အားသွင်းမီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဘက်ထရီများနဲ့နေစွမ်းအင်အပေါ်ကို သာမှီခိုနေရတာကြောင့် အခုလိုထိန်ထိန်သာ ကမ်းပိန်းကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Lighting Myanmar စီမံကိန်းကို သြစတြေးလျအစိုးရ၊ကနေဒါအစိုးရနဲ့ ယူကေအစိုးရတို့က ပူးပေါင်းပြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန (DRD)နဲ့လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။